MRB dia any Shanghai, Sina. Shanghai dia fantatra amin'ny anarana hoe "Paris Paris", Ivotoerana ara-toekarena sy ara-bola ao Shina izy ary manana ny faritra varotra voalohany malalaka any Shina (faritra fitsarana ara-barotra malalaka).
Taorian'ny fandidiana efa ho 20 taona, ny MRB androany dia nanjary iray amin'ireo orinasa miavaka ao amin'ny indostrian'ny varotra sinoa miaraka amin'ny ambaratonga lehibe sy ny fitaomana, manome vahaolana marani-tsaina ho an'ny mpanjifa antsinjarany, ao anatin'izany ny rafitra manisa olona, ​​ny rafitra ESL, ny rafitra EAS ary ireo vokatra mifandraika amin'izany.
Ny vokatray dia aondrana any amin'ny firenena sy faritra maherin'ny 100 ao an-trano sy any ivelany. Miaraka amin'ny fanohanan'ny mpanjifanay mahery vaika dia nanao fandrosoana lehibe ny MRB. Manana maodely marketing tsy manam-paharoa, ekipa matihanina, fitantanana henjana, vokatra tsara ary serivisy tonga lafatra izahay. Mandritra izany fotoana izany dia mifantoka amin'ny haitao mandroso, fanavaozana ary fikarohana sy famokarana vokatra izahay mba hampiditra hery vaovao ao amin'ny marika. Manolo-tena izahay amin'ny fanomezana vokatra sy serivisy matihanina kalitao sy samihafa ho an'ny indostrian'ny mpivarotra eran'izao tontolo izao, ary hanao vahaolana manan-tsaina manokana ho an'ireo mpanjifantsika mpivarotra.
MRB dia any Shanghai, Sina.
Niorina tamin'ny MRB ny MRB tamin'ny taona 2003. Nananay zon'ny fanafarana sy fanondranana tsy miankina izahay tamin'ny 2006. Hatramin'ny nananganana azy dia nanolo-tena izahay hanome vahaolana maranitra ho an'ny mpanjifa antsinjarany. Ny lisitry ny vokatra misy anay dia misy ny rafitra fanisam-bahoaka, ny rafitra fantsona elektronika, ny rafitra fanaraha-maso ny lahatsoratra elektronika ary ny rafitra fandraketana horonantsary nomerika, sns., Manome vahaolana feno sy amin'ny antsipiriany ho an'ireo mpanjifa antsinjarany eran'izao tontolo izao.
Inona no ataon'ny MRB?
MRB dia miavaka amin'ny R&D, ny famokarana ary ny marketing amin'ny kaontera People, ny rafitra ESL, ny rafitra EAS ary ireo vokatra mifandraika amin'izany. Ny lisitry ny vokatra dia mandrakotra maodely maherin'ny 100 toy ny latabatra IR bream people, counter 2D fakantsary ho an'ny olona, ​​counter 3D 3D, rafitra fanisam-bahoaka AI People, Counter Counter, counter an'ny mpandeha, labozy elektronika misy habe samihafa, vokatra anti-shoplifting hafakely .. Sns
Ny vokatra dia be mpampiasa amin'ny fivarotana antsinjarany, rojo fitafiana, fivarotana lehibe, fampirantiana ary fotoana hafa. Ny ankamaroan'ny vokatra dia nandalo FCC, UL, CE, ISO ary fanamarinana hafa, ary ny vokatra dia nahazo fiderana iraisan'ny mpanjifa.
Fa maninona no mifidy MRB?
1. Masinina mpanamboatra mendrika
Ny ankabeazan'ny fitaovan'ny fanamboaran-tsika dia ampidirina mivantana avy any Eropa sy Amerika.
2. Fahaizana R&D tsara
Tsy vitan'ny hoe manana ny teknikanay manokana fotsiny isika, fa miara-miasa amin'ny oniversite ihany koa mba hanao fikarohana sy fampandrosoana. Amin'ny alàlan'ny ezaka mitohy, mitazona ny vokatray ho lohalaharana amin'ny indostria izahay.
3. Fanaraha-maso kalitao henjana mandritra ny faritra 3 alohan'ny fandefasana
■ Fanaraha-maso kalitao ny akora fototra.
■ Fitsapana vokatra vita.
■ Fanaraha-maso kalitao alohan'ny fandefasana.
4. OEM & ODM misy
Azafady mba lazao anay ny eritreritrao sy ny zavatra takinao, vonona izahay hiara-miasa aminao hanamboatra ny vokatrao manokana.
Ny namantsika avy amin'ny firenena samihafa eto amin'izao tontolo izao.
Ny fahalalana bebe kokoa momba anay dia hanampy anao bebe kokoa.
Ampiasao ny 20 taona niainanay ho an'ny indostria hanoroana ny kalitao tsara indrindra sy ny vokatra mety indrindra ho anao.
Mpivarotra miampy teknisianina no hanome anao serivisy isan-karazany mandritra ny dingana rehetra.
7 * 24 ora rafitra famaliana.
Serivisy fanofanana teknika fanampiana ara-teknika
Fanohanana ny vidin'ny mpaninjara
Fanohanana 7 * 24 ora an-tserasera
Serivisy fiantohana lava
Serivisy fitsidihana fitsidihana tsy tapaka
Serivisy fampiroboroboana vokatra vaovao
Serivisy fanatsarana vokatra maimaim-poana